Nidaamyada hargabka loo adeegsaday howsha jeermis dilid Habka qallalan waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan. Xilligan la joogo, markaan ka fekereyno hab wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo qolalka, xalalka noocan ah waxaa badanaa tixgalinaya kuwa mas'uul ka ah caafimaadka dadka kale. Aaladahaan si guul leh ayaa loogu adeegsan karaa goobaha shaqada ama inta lagu jiro kulannada qoyska, sidoo kale beerta dhexdeeda. Nidaamyada khaladka ah waxay ka kooban yihiin qaybaha ugu tayada sareeya, iyo nozzles-ka loo adeegsado waxaa lagu gartaa karti sare.
Nidaamyada dhirta lagu nadiifiyo ee jeermis-dilidda ayaa lagu deeqay Naqshadda Qaab-dhismeed Magaalada
Aaladaha ceegaaga ee jaranjarada u adeegsada hab qallalan oo qallalan ayaa u shaqeeya iyaga oo u kala fidinaya ceelka jeermis dile ah. Diyaargarowga noocan oo kale ah wuxuu ku leeyahay saameyn ba'an bakteeriyada iyo fayrasyada ka jira deegaankayaga. Waxa ka dhashay ceeryaamo qalalan Waxay leedahay guryo sare oo gunta ka buuxaan waxna ku badbaadin kara dusha sare ee ay taabato.
Thanks to suurtagalnimada isticmaalka nidaamyada qaladka ah xaaladaha oo dhan, taasi waa, on goobaha, w jardiinooyinka iyo dhismayaasha gudaha, oo ay uga mahadcelinayaan suurtagalnimada isticmaalka dawooyinka jeermiska ku habboon loo isticmaalo, aaladdahan si ballaaran ayaa loo isticmaalaa.
Nidaamyada qaladka ee casriga ah waxay u isticmaalaan jeermis-dilis diyaarinta kiimikada qaab aerosol cufan, kaas oo u oggolaanaya jeermis-ka-dilis, taas oo ah, in si muuqata si muuqata hoos loogu dhigo xaddiga shey-barooyinka hawada ku dhaca ee hawada lagu gaaro.
Tirtirida microorganic-yada unugyada faafa ee adeegsanaya nidaamyada qulqulka ayaa sidoo kale suurtagal ku ah isbitaallada, rugaha caafimaadka, guryaha iyo gaadiidka dadweynaha.
Adoo maskaxda ku haya tilmaamo Kormeeraha Guud ee Nadaafaddaka hortagga faafitaanka COVID-19, waxaan bixinnaa xalal casri ah oo kor loogu qaadayo nabadgelyada goobta shaqada.
aamin iyo badbaado wax ku ool ah ee meelahan la isticmaalayo habka ceeryaanta qallalan
talaabooyinka ilaalinta tooska ah: waji xidhka, fiisooyinka
Bixiyeyaasha dareeraha: taagan iyo darbiga dushiisa
hubinta booska iyo horumarinta qulqulka ugu habboon ee shaqaalaha iyo macaamiisha si loo yareeyo halista ka dhalan karta cudurka COVID-19.
Xalka la soo jeediyay ee ku saabsan xarumaha jeermiska jeermiska, kala-soocidda booska iyo qalabka ilaalinta shaqsiyadeed waa isku ficil iyo hal-abuurnimo isku waqti isku mid ah.
Eeg sidoo kale: Cusub oo la soo bandhigo! Rugta wasakhaynta - nadaafadda gacmaha ka METALCO
Fasaxinta booska ee leh habka qalka qalalan waxay u oggolaaneysaa in jeermisyada iyo hawada la nadiifiyo. Waxaa qabta koox shaqaale ah oo aqoon u leh isticmaalka mashiinada iyo diyaarinta. Qaabkan waxaa loo oggol yahay in lagu isticmaalo xarumaha dawladda, gaadiidka dadweynaha, xafiisyada, iskuulada, xanaanada iyo isbitaalada.
Jeermiska qashinka qalalan waa hab deg deg ah oo nabdoon oo lagu nadiifiyo meelaha, iyadoo lagu saleynayo qaaciddaba biodegraddd, leh oggolaanshaha isticmaalka iyo xaqiijinta waxqabadka fayraska, sidoo kale waa lid ku ah COVID-19.
Waxaan falanqeyn doonnaa qaabka dhisme u shaqeynayo
Waxaan u diyaarin doonnaa hagitaanno ku saabsana qulqulka shaqaalaha iyo macaamiisha isla markaana yareynaya halista inta uu socdo faafa;
Waxaan ku salaynay khibradeena sanado badan oo shaqo ah shirkadaha ka socda warshadaha HoReCa, silsiladaha maqaayadaha, halkaas oo socodka dadka iyo badeecaduhu ay muhiim u yihiin isbadalka;
Iyada oo ku saleysan xisaab hubinta, waxaan soo jeedin doonnaa xalal gaar ah oo quseeya xarumaha jeermiska jeermiska, kala-soocidda booska, qalabka ka-ilaalinta shaqsiyeed, isgaarsiinta aragga
CADAALADAHA FARSAMADA BY FARIINTA DHAQANKA
XALKA UNIQUE u oggolaanshaha jeermis-ka-qaadashada dusha sare iyo hawada;
Waxa qabtay KOOXDA LACAG LA'AAN isticmaalka XAALADAHA GAARKA AH
HABKA LOO SAMEEYEY ISTICMAALKA : xarumaha dowladda, gaadiidka dadweynaha, xafiisyada, iskuulada, xanaanada, isbitaalada;
FARSAMADA Qashin qulqulaya iyadoo la adeegsanayo mashiinnadayada (100 m3 waxay qaadataa qiyaastii 6 daqiiqo)
AQOONTA KHATARTA IYO BADBAADADA, oo ku saleysan qaaciddadiisa biodegrad-ka, aldehydes, chlorine, maaddooyin sun ah;
Wax soo saarku wuxuu leeyahay adeegyo iyo xirmooyinka xogta amniga la aqbali karo in la isticmaalo
ILAALINTA DHAQAALAHA DHAQANKA
Heerka gaarsiisan EN14476 laamaha caafimaadka ka hortagga noocyada fayrasyada aan baqshadda lahayn (tusaale. Norovirus, dabeysha, Adenovirus) iyo daboolka (Tallaalka cudurka 'Vacciniavirus') kaas oo sidoo kale ku jira COVID-1
DIIWAAN GELI KARA DIIWAAN GELINTA DHAQAALAHA
Oggolaanshaha suuqgeynta sheygan-dilaha ah: no. 7420/18. Shahaadada PZH No.BK / K / 0863/01/2018
Muuqaalka Ballaaran ee Noolaha: Waxay baabi'isaa bakteeriyada, faayraska, kud-gooyada, fangaska, caarada
tallaabo: Jeermis-Muuqaal buuxa, Maydhista, Nadiifinta, Deodis-ka, Wareejinta hawada, Bixinta wasakhda
waxay meesha ka saartaa: Wasakh, Boodh, Boodh, Sediments, wasakheynta Organic, Microorganisms, Pathogens
Faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay isticmaaleha
SAFE u isticmaalida, oo ku saleysan hal-abuur cusub, qaaciddadiisa biodegradable aan lahayn aalkolo, aldehydes, chlorine, maaddooyin sun ah.
NON-FLAMMABLE - Qaab biyo-aan-karin-ku-saleysan-biyoodka ayaa baabi'isa khatarta dabka.
U DIYAARSAN - UBADAN waxyaabaha ugu badan: balaastikada, birta badankeed oo ay ku jiraan aluminium, goomayaasha caagga ah, rinjiga rinjiga, maryaha ...
MULTI-TASK - gacmo dhaqashada, ku buufinta, tirtirka, xumbo firfircoon, qubeyska, fumigation
QASHINKA IYO NADAAFADAYAASHA - waxay si wax ku ool ah u tirtiraan wasakhda iyo wasakhda dabiiciga ah: waxay baabi'isaa caaryada, fungi, boodhka, dufanka, saliidda, wasakhda dufanka leh ee ka samaysan dharka iyo roogagga, matagga, saxarada, dhiigga, cuntada qudhmay, qashinka dabiiciga ah, qashinka, iwm.
Waxay u abuurtaa FILAM FOAM gudaha xargaha xumbada, kaas oo ku fidinaysa ficilka sagxadaha toosan iyo kanaalada
100% hubaal ahaanshaha jeermis - oo lagu tijaabiyo iyada oo la raacayo heerar badan oo Yurub ah EN ah. (*miis)
CUDURRADA KHILAAFKA AH - Nooca ugu ballaaran ee biocidal spectrum waqtiga ugu yar illaa 15 daqiiqo (Bakteeriyada, Fayraska, Fungi, Spores)
TALLAABADA JOOGTADA AH EE DEGDEG AH - Wuxuu baabi'iyaa Legionella Pneumophila 1 daqiiqo gudahood sida ku cad EN 1040, EN 1276.
KA HORTAGAA samaysanka fangaska, caaryada iyo bakteeriyada, maxaa yeelay waxay baabi’isaa fallaadhaha (kudka) - ma aha oo kaliya inay joojiso koritaanka noolaha, laakiin sidoo kale waxay burburisaa maaddadooda hidde.
KA SAMEEYA UNDODGEENT - Si joogto ah ayay u saartaa urta xun, urka xun ee qashinka dabiiciga ah waxayna ka tagtaa ur cusub.
Diyaarinta NANOCLEAN AIR GDU (AKHRISKA ISTICMAALKA) waa biyo aan ololi karin, biyo ku saleysan.
Isu diyaarinta waa mid noolaha, ma-sunta ahayn, ma-kansarka, kuma xasaasiyad la'aan iyo xanaaq la'aan.
Xalka 5% ee shaqada looqeexinayo looma qaddarin inuu yahay mid halis ah sida uu qabo Xeerka 1272/2008 / EC.
Ka fogow carruurta. Akhri SDS kahor intaadan isticmaalin.
Astaamaha u gaarka ah ee xalalka ku saleysan qashin-qubka iyo naxaasta.
KHILAAFADKA LACAG LA'AAN - Qaybta ugu ballaadhan ee loo yaqaan 'biocidal spectrum' waqtiga ugu gaaban illaa 15 daqiiqo
(Bakteeriyada: 1 ÷ 5 daqiiqo, Virus: 5 daqiiqo, Fungi: 1 ÷ 15 daqiiqo, Spores: 5 daqiiqo, Mycobacteria: 5 daqiiqo)
DHAQANKA BIOCIDAL - wuxuu tirtirayaa bakteeriyada loo yaqaan 'Legionella Pneumophila' 1 daqiiqo sida ku xusan EN 1276.
KA HORTAGA isku-dhufashada bakteeriyada, fangaska iyo caaryada, maxaa yeelay ma horjoogsanayso oo keliya koritaanka sheyga, laakiin sidoo kale waxay baabi'isaa walxaha hidde. BAADHITAAN - Waxaa lagu tijaabiyay si waafaqsan heerarka Yurub ee EN badan.
KA SOO HAGAJISAA UNDODGEENT - Si joogto ah ayuu u tirtirayaa urka xun ee boqoshaada iyo urka xun ee qashinka dabiiciga ah.
SAFE u isticmaalida, kuna saleysan qaacido aamin ah oo cusub, wax aldehydes ah, koloriin lahayn, aids.
NON-FLAMMABLE - Qaab-dhismeedka biyaha ku saleysan ayaa baabi'inaya halista dabka.
MULTI-TASKING - dhaqitaanka gacanta, buufinta, tirtirka, xumbo firfircoon, biyo gelinta, uumiga.
QASHINKA IYO NADAAFADDA - waxay si wax ku ool ah u baabi'isaa wasakhda iyo nijaasta dabiiciga ah: waxay baabi'isaa caaryada, fungi, boodhka, dufanka, saliidda,
wasaqda dufanka leh ee ka sameysan aalkolada iyo rooga, mantagga, saxarada, dhiigga, cuntada suuska, wasakhda dabiiciga ah, iwm.
Waxay leedahay oggolaanshaha PZH iyo PERMIT inay ka ganacsato sheygan-dilaha.
Bakteeriyada loo yaqaan 'Clostridium difficile disinfection'kaas oo siiya jeermis-diliswaa imisa jeermisku hawo qaboojintaoo macnaheedu yahay erayga jeermis dilisWaa maxay jeermiskuWaa maxay jeermisku iyo sida ay muhiimka u tahay in laga hortago fiditaanka cudurWaa maxay jeermiskuWaa maxay baabi'inta jeermiska ku-tallaalka jeermiskaWaa maxay wasakhda iyo baabi'intaWaa maxay wasakhda iyo muxuu yahay?Waa maxay jeermis-ka-qaadista iyo sidee ayey uga hortagtaa faafitaanka cudurkaWaa maxay jeermisku iyo waa maxay doorkeeda ka hortagga faafitaanka cudurWaa maxay jeermis-dilis iyo jeermis-diliswaa maxay ciddiyaha ciddiyahaWaa maxay wasakhda ku jirta waxyaabaha la isku qurxiyoWaa maxay wasakhda timaha ka timaadda timahaWaa maxay erayga jeermiskaWaa maxay erayga jeermis-ka-gooshu iyo sidee bay uga hortagtaa faafitaanka cudurkaWaa maxay erayga jeermiskaMaxuu yahay jeermiskujeermis dilidjeermiska 24jeermis-dilis iyo jeermis-diliskabaha jeermiska dilaJeermiska ka-dilidda ka dib mycosis-kajeermiska jeermiska ee kabaha 'lumpex'Waa maxay jeermiskujeermis-dilid waa maxayJeermiska ka-hortagga waxa ay tahay iyo sida ay muhiimka u tahay in laga hortago fiditaanka cudurWaa maxay jeermisku iyo waa maxay doorkeeda ka hortagga faafitaanka cudurjeermis-dilitaan waxa ay ka dhigan tahayjeermis-dileyaasha kaas oo meesha ka saarajeermis-dilis sababta khamriga ku saleysanqeexitaanka jeermiskajeermis-dilis iyo jeermis-dilisjeermis-dilis iyo jeermis-dilis oo ku yaal meel-qurxintajeermis-dilis iyo jeermis-dilis oo ku yaal salaan qurxinta pdfjeermis-dilid intee le'egukun jeermiskajeermiska sidaJeermiska waxa ay muhiim tahayJeermis-dileyaasha oo muhiim u ah ka-hortagga faafitaanka cudurradajeermis-dilis oo muhiim u ah ka-hortagga faafitaanka cudurradaJeermis-dileyaasha oo muhiim u ah ka hortagga faafitaanka cudurkajeermi hawo qaboojintahawo qaboojinta jeermiska intee in le'egjeermis-ka-dhalaasha hoteelka hudheel kasta waa imisajeermiska jeermiska digaaggajeermiska digaagga digaagga gadaashiisajeermiska gurigajeermis-ka-dilidda aaladdaJeermi-dileyaasha kabahaJeermiska dilaaga ahJeermiska dilaaga ah waa maxayjeermi-ka-dilidda jeermiskaJeermiska ka dib gowsaarka kadibJeermis ka dib dhimashadajeermis dilidda ka dibJeermiska dhimashada ka dibJeermiska dusha sareQalabka jeermiska lagu dhaqoWaxyaabaha jeermisku ku faafayojeermiska gacantajeermis dilidjeermis dilidjeermiska maqaarkaJeermiska ceelashajeermi si fiican u dishajeermi si qoto dheer leh jeermis leh sodium hypochloritejeermi qalalanJeermiska diirimaadka imisa digriiJeermiska diirinta ee rakibaadda biyo kulul sida ugu badanJeermiska diirinta kuleylka sida badanjeermiska biyahajeermiska ka cabba biyahajeermiska toyJeermiska ecolabImmisa ayay ku kacaysaa in lagu daaweeyo baranbaradaImmisa waa jeermis-diidka aqalka?Immisa ayuu yahay qiimaha cayayaanka jeermis-dileyaasha sariirta?waa intee jeermis-ka-goysyada gawaarida wax iibsigamuddo intee le'eg ayay qaadataa qaboojinta jeermisku?waxa jeermisku u eg yahaysida jeermiska gurigu u muuqdomuhiimadda ay leedahay in jeermisku ka hortago faafitaanka cudurkadhaqida iyo jeermiska gacmahaJeermiska Demodexsharax muhiimada ay leedahay qalabka nadiifinta iyo maacuuntaJeermiska dilaaca 'paravovirosis'bostada qaboojinta jeermiskajeermi-ka-dilidda jeermiskamycobacteria, jeermis-dilisEeg erayga jeermis-ka-saar illaha laga heli karo aqoonta oo qor waxa ay tahayjeermis-dile iyo jeermis-dilisjeermiska qallalanceeryaamo qalalanwaxay ku khafiifisaa jeermiska gurigajeermis dilis waa maxaymuddada jeermiska, oo muhiim u ah ka hortagga faafitaanka cudurkaqulqulayafikradaha madoowqolalka fogayntakuleylka kulululvqiimaha dhirifka abaartadib u eegista ulvwaalan Warsawdaadashada cadaadiska sare